Hello Nepal News » रोनाल्डो रियल मड्रिड फर्किने सम्भावनाको ढोका खुल्यो : के भन्छन् एजेन्ट ?
रोनाल्डो रियल मड्रिड फर्किने सम्भावनाको ढोका खुल्यो : के भन्छन् एजेन्ट ?
एजेन्सी, फागुन २८
इटालियन क्लब युभेन्टसका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो पूर्वक्लब रियल मड्रिड फर्किन सक्ने सम्भावनाको ढोका खुला भएको छ । तीन दिनअघि युभेन्टस च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ बाटै आउट भएपछि रोनाल्डोको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भइरहेका बेला उनको स्पेन फिर्तीको चर्चा पनि सँगै सुरु भएको हो । रोनाल्डो सन् २०१८ मा रियल छाडेर युभेन्टस पुगेका थिए । तर, युभेन्टसमा तीन सिजन बिताउँदै गर्दा पनि रोनाल्डोको प्रेरणामा युभेन्टसले च्याम्पियन्स लिग जित्न नसकेपछि रोनाल्डोको आलोचना बढ्नुका साथै इटालीमा उनको भविष्य अनिश्चित रहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
केही समयअघि मात्रै ३६औं जन्मदिन मनाएका पोर्चुगिज फरवार्ड रोनाल्डोको सम्झौता युभेन्टससँग यो सिजनपछि पनि थप एक सिजनसम्मका लागि रहेको छ । तर, लगातार तीन सिजनसम्म पनि रोनाल्डोसहितको युभेन्टस च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टरफाइनलभन्दा अघि बढ्न नसकेपछि रोनाल्डोको आलोचना बढेको छ । जबकि, युभेन्टसले रोनाल्डोलाई च्याम्पियन्स लिग जित्ने लक्ष्यका साथ ११६ मिलियन युरोमा भित्र्याएको थियो । तर, त्यसअनुसार च्याम्पियन्स लिगमा युभेन्टसले प्रगति गर्न सकेन । अझ, रोनाल्डो आइकन त युभेन्टस च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम आठबाट अघि बढ्न पनि सकेन । जबकि, २०१५ यता ६ वर्षको अवधिमा युभेन्टस दुईपटक त फाइनल खेलेको टोली हो ।
अहिले विभिन्न खेल पण्डितहरूले पनि रोनाल्डोलाई युभेन्टसले अब फ्री ट्रान्सफरमा जान दिएर भए पनि नयाँ सिजनका लागि नयाँ ढंगले टोली निर्माण गर्न सुझाव दिइरहेका बेला रोनाल्डोको स्पेन फिर्तीको चर्चा सुरु भएको हो । गत सिजनबाटै सरुवा बजारमा रोनाल्डोको नाम फ्रेन्च क्लब पिएसजीसँग पनि जोडिँदै चर्चामा छ । तर, योभन्दा रोनाल्डोको सम्भावना अझै पनि रियल मड्रिड र इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडमध्ये कुनै एक क्लबमा फिर्तीको सम्भावना ज्यादा रहेको देखिन्छ ।
यसैक्रममा, रोनाल्डोका एजेन्टले रियल मड्रिडसँग उनको फिर्तीबारे प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेका छन् । रियल मड्रिडसँग निकै राम्रो सम्बन्ध रहेका जोर्गे मेन्डेजले रियलका अधिकारीसँग रोनाल्डोको सम्भावित सरुवाको विकल्पबारे छलफल गर्न ढोका खुला गरेको खबर अन्तर्राष्ट्रिय खेल मिडियाले छापेका छन् । रिपोर्टअनुसार यदि युभेन्टसले रोनाल्डोलाई फ्री ट्रान्सफरमा छाड्न तयार भए वा न्यूनतम् मूल्यमा भए पनि छाड्न तयार भए रोनाल्डोको स्पेन फिर्तीको सम्भावना अझै पनि जीवितै रहेको बताइन्छ । रियलका प्रशिक्षक जिनेदिन जिदान अझै पनि रोनाल्डोसँग काम गर्न चाहन्छन् । जिदान र रोनाल्डोबीच व्यक्तिगत रूपमा निकै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । रोनाल्डो हिँडेपछि रियल पनि लगातार संघर्ष गर्दै आएकाले सामान्य सर्तमा रोनाल्डो रियल फर्किन सक्छन् ।
तर, त्यसका लागि रोनाल्डोले कम तलब–सुविधामै स्पेन फर्किन राजी हुनुपर्छ । उमेरले ३६ पुगेका रोनाल्डोलाई पहिलाकै जस्तो धेरै तलब दिन रियलले सक्दैन । घट्दो तलब र निश्चित अवधिका लागि सम्झौता बन्न सके रोनाल्डोले करिअरको अन्तिम समय रियलमै बिताउन सक्छन् । त्यसै पनि, रियलसँग रोनाल्डोको खास भावनात्मक सम्बन्ध छ । उनले सन् २००९ देखि २०१८ सम्म रियलमा बिताउँदा १५ उपाधिसहित चार बालोन डिओर अवार्ड र तीनपटक युरोपियन गोल्डेन बुट जितेका थिए । रोनाल्डो रियलको इतिहासकै सबैभन्दा सफल खेलाडी हुन् । उनले रियलका लागि सबैखाले प्रतियोगिताबाट कूल ४३८ खेल खेल्दै ४५० गोल गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २८ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ०८:३३